Global Voices teny Malagasy » Ahoana No Hatao Mba Hampitsaharana Ny Fanambadian-jaza ao Afganistana?? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Aogositra 2017 2:49 GMT 1	 · Mpanoratra Anais Wardak Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Afganistana, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Sary ho fanaingana fotsiny ihany. Nalain'ny mpampiasa Flickr SAM Nasim. Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0).
Vao tsy ela akory tamin'ity taona ity, naka dingana politika iray tsy mbola nisy toa azy i Afganistana amin'ny ady fanoherana ilay fomban-drazana ‘ankizy ampakarina’ tamin'ny alalan'ny fanombohana  ny Drafitr'asa Nasionaly mba ho Fanafoanana ny Fanambadian-jaza sy Aloha Loatra. Velom-panantenana ireo mafana fo fa lasa lavitra tsy ho an-taratasy fotsiny ilay drafitra, na eo aza mazava ho azy ireo fanamby manoloana sy ny vokatra mahonena avy amin'ny fanjakana mikasika ny fampiharana azy.
Ankehitriny, araka ny Girls Not Brides , zazavavy iray amin'ny telo no manambady alohan'ny faha-18 taonany any amin'ny tanyan-dalampandrosoana. Olana manokana ao Afganistana io fomba io, izay nahatratra 33%  ny tahan'ny fanambadian-jaza tamin'ny taona 2016. Na nilaza aza ireo vondrona mpiaro zo fa fanitsakitsahana zon'olombelona  ny fanambadiana rehetra mialohan'ny faha-18 taona, mbola mihatra foana io hatreto ao Afganistana, izay ny taona ara-dalàna hahafahana manambady dia napetraka ho 16 ao anaty Lalàna Sivily ao Afganistana .
Ao Afganistana, any ambanivohitra  no tena ahitana kokoa ireny fanambadiana ireny raha mitaha amin'ireo tanandehibe toa an'i Kaboul.
Ny Ministeran'ny Raharaha Mikasika ireo Vehivavy ary ny Mnisiteran'ny Serasera sy ny Kolontsaina no nanangana ilay Drafitra Nasionaly, ary nankatoavina tamin'ny volana Aprily izany.
Ny Vadin'ny Filohan'i Afganistana, Rula Ghani , no iray amin'ireo mpanohana matanjaka an'ilay Drafitra Nasionaly.
“Mamporisika ireo fianakaviana Afganistana aho mba hanakana ny fanambadian-jaza sy an-tery. Miatrika zava-doza goavana ireo zanakavavinareo raha toa manambady aloha loatra. Maka ny fahazazàny sy ny soa tokony ho azy momba ny ho aviny ny fanambadiana aloha loatra”.
Ny Fanafoanana ny fanambadian-jaza sy ny fampiroboroboana ny fanabeazana no iray amin'ireo Tanjona Fampandrosoana Maharitra  miisa 17 navoakan'ny Firenena Mikambana mba hamongorana ny fanambadian-jaza sy hampiroborobona ny lafiny fanabeazana.
Marefo ny tombambokatra mikasika Ireo Drafitra Asa Nasionaly ao Afganistana eo amin'ny lafiny fampiharana. Na ny Drafitra Asa Nasionaly tamin'ny taona 2007 mikasika ireo Vehivavy ao Afganistana  , na ny Lalàna mikasika ny Fanafoanana ny Herisetra Atao amin'ireo Vehivavy  tamin'ny taona 2009, na ny drafitra ho fampiharana ilay Fanapahankevitra 1325 an'ny Filankevi-Pilaminan'ny Firenena Mikambana  ho fanajàna ny vehivavy, dia samy tsy azo heverina ho fahombiazana.
Ankoatr'izay, ny Drafitra Asa Nasionaly ho Fanafoanana ny Fanambadian-jaza sy Aloha Loatra ao Afganistana dia toa tsy natao loatra ho takatry ny daholobe. Noho izany, henjana ho an'ireo tsy mpandrafitra politika ny hamaritra raha nafapetraka hanakiviana ny fanambadian-jaza ireo fepetra ireo, ary inona ireo rafitra misy mba hamadihana ireo teny ho lasa asa.
Ny tantaran'i Zahra
Tsy ampy herintaona akory izay, ny 18 Jolay 2016, vaky ny tantara fa i Zahra, zazavavy 14-taona nanambady ary bevohoka efa-bolana no maty vokatry ny fandoroan ‘ny fianakaviam-badiny azy (asongadin'ny tatitra tamin'ny vaovao ireo ratra mahatsiravina). Ny rainy, Muhammad Azam, no nilaza tamin'ny New York Times  fa ny zaobaviny, ary ny vadiny ihany koa, no nanindrona antsy sy namono an'i Zahra raha nandà tsy nety nandeha niasa tany amin'ny fambolena zava-maha-domelina izy noho ny vohoka nentiny.
Nanamafy ny rain'i Zahra fa nodoroana tamin'ny afo ny zanany vavy mba hanafenana ny fampijaliana ara-batana nihatra taminy nialohan'ny nahafatesany.
Niharan'ny ‘baad ’ (takalo) i Zahra, fombandrazana iray idiran'ny fanolorana ny ankizivavy iray ho an'ny fianakaviana iray hafa mba hamahàna ny disadisa. Marina tokoa, namidy izy satria ny rainy nilefa niaraka tamina vehivavy iray avy amin'ny fianakaviam-badin'i Zahra. Nampiasaina mba hamahàna ny olana nisy teo amin'ny fianakaviana roa tonta izy.
Indrisy, iray amin'ireo tantara maro ny tantaran'i Zahra. Samy manana ny tantarany daholo ny fanambadian-jaza tsirairay avy, saingy ankavitsiana ireo mba niafara tanaty fahasambarana .
Nahoana ireo fianakaviana Afganistana no mivarotra ireo zanany vavy?
Maro ireo antony tokony hojerena raha hanombatombana hoe nahoana ireo fianakaviana no tonga amin'ny fanapahankevitra hivarotra ireo zanany vavy. Na izany aza anefa, tsara ny manamarika fa matetika ny fanapahankevitra hivarotra ireo ankizivavy dia noho ny ataon'ireo raim-pianakaviana fa tsy avy amin'ireo vehivavy, izay zara raha manana ny holazainy na tsisy lazaina mihitsy.
Ny tena antony dia ny fahantrana. Ny ankamaroan'ireo fianakaviana monina any amin'ireo faritra ambanivohitra  dia mivarotra ireo zanany vavy mba hatakalo vola na biby fiompy. Amin'ireo tranga maro, tsy mahavelona ny zanany ireo fianakaviana, noho izany tsy manantsafidy izy ireo afatsy ny mivarotra ireo zanany vavy. Indrisy, ireo ondry, ombivavy, ary vola no manandanja kokoa amin'ireo raim-pianakaviana ao Afganistana fa tsy ny zanany vavy.
Angamba noho io antony io no nitarainan'i Khan Wali Adil,  mpampianatra sady mpikatroka ho an'ny zon'ny vehivavy, izay nilasy manoloana ny Antenimieran'i Afganistana nandritra ny iray volana tamin'ny taona 2016 mba hanoherana ny fomban-drazana ampiharina toy ny “baad” fa ao Afganistana dia “sahala amin'ireo biby no fitondra [ireo zazavavy].”
Betsaka ireo zaza nampanambadiana, toa an'i Zahra, dia latsaka anaty fanambadiana atao toy ny “baad ” ho fifampiraharahana fanefana trosa.
Amin'ireo tranga hafa, atao takalo eo amin'ireo fianakaviana roa tonta ireo ankizy manambady. Ohatra, ao Afganistana, ‘manandanja ’ kokoa ireo ankizilahy noho ireo ankizivavy, noho izany, matetika, mandray fanapahankevitra ny raim-pianakaviana iray mba hanakalo ny zanany vavy hahazoana vady ho an'ny zanany lahy. Fombandrazana iray hafa io fomba fanao io, ary antsoina hoe “baadal .”
Na voararan'ny Lalàna mikasika ny Fanafoanana ny Herisetra atao amin'ireo Vehivavy  aza ny “baad ” sy ny “baadal ” tamin'ny taona 2009, mbola mihatra hatrany ireo mandraka androany.
Ireo vokatry ny fanambadian'ankizy
Ny vokatra tena miharihary sy mahafaty ateraky ny fanambadian-jaza dia ny fitondrany vohoka aloha loatra. Mbola tsy vonona tsara akory ny vatany hitondrana vohoka sy hiteraka zazakely. Mety hijaly vokatry ny ratra anaty noho ny herisetra ara-nofo ihany koa ireo zazavavy manambady tanora loatra.
Ny tsy fisian'ireo toeram-pitsaboana sy fanarahamaso ny fahasalamana araka ny tokony ho izy any amin'ireo faritra ambanivohitra no anisany olana satria tsy afaka mahazo fitsaboana ireo zazavavy na fananrahamaso mandritra ny fitondrany vohoka sy fiterahany, izay matetika mitarika ny fahafatesan'izy ireo.
Mijaly noho ny herisetra ara-batana sy ara-tsaina ihany koa ireo tovovavy kely sasany any amin'ireo fianakaviany vaovao. Ankoatra izany, koa satria izy ireo “an'ilay” fianakaviana vaovao, matetika ry zareo no tsy afaka mandeha any an-tsekoly sady tsy afaka miasa. Sarotra ho azy ireo ny ho lasa mahaleotena ara-bola.
Maro ireo tovovavy no mihevitra fa ny famonoantena no làlana tokana hialàna amin'ny fanambadiana. 16 taona i Bora Gull Heha raha nanapaka hevitra ny handoro ny tenany tamin'ny jiro jabora.
Monika Hauser , gyneco mpitsabo momba ny vehivavy, izay nanangana ny Medica Afghanistan, , nilaza tamin'i Rawa News fa “mitombo ny isan'ny mamono tena, indrindra any amin'ireo tanàndehibe satria miady amin'ny fanambadiana an-tery izy ireny any.” Hita ho tsy dia nahita fianarana loatra ireo zazavavy monina any amin'ny faritra ambanivohitra ary mety miaritra am-pahanginana ny jaly.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/04/103830/
 Girls Not Brides: http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/afghanistan/
 fanitsakitsahana zon'olombelona: http://www.girlsnotbrides.org/human-rights-council-adopts-resolution-to-end-child-early-and-forced-marriage/
 Lalàna Sivily ao Afganistana: https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/10/Civil-Code-of-Afghanistan-ALEP-Translation.pdf
 Rula Ghani: http://theirworld.org/news/afghanistan-action-plan-to-end-child-marriage
 Tanjona Fampandrosoana Maharitra: http://www.unfpa.org/sdg
 Drafitra Asa Nasionaly tamin'ny taona 2007 mikasika ireo Vehivavy ao Afganistana: http://ago.gov.af/Content/Media/Documents/NAPWA382016145514117553325325.pdf
 ny Lalàna mikasika ny Fanafoanana ny Herisetra Atao amin'ireo Vehivavy: https://www.hrw.org/news/2016/01/20/dispatches-law-ignored-and-another-horror-afghanistan
 ilay Fanapahankevitra 1325 an'ny Filankevi-Pilaminan'ny Firenena Mikambana: http://mfa.gov.af/Content/files/English%20NAP%206.pdf
 maty vokatry ny fandoroan: https://www.youtube.com/watch?v=tJ5r0FO8Hkw
 New York Times: https://www.nytimes.com/2016/07/19/world/asia/afghanistan-zahra-child-marriage.html
 Khan Wali Adil,: http://www.nbcnews.com/news/world/baad-afghanistan-virgin-slaves-given-away-end-disputes-n567696
 nanapaka hevitra ny handoro ny tenany : http://www.rawa.org/temp/runews/2013/04/19/afghan-women-escape-marriage-through-suicide.html
 Monika Hauser: http://www.medicamondiale.org/fileadmin/redaktion/5_Service/Mediathek/Dokumente/English/Press_Information/Biography-Dr-Monika-Hauser-medica-mondiale_01-2017_CR-medica-mondiale.pdf
 Medica Afghanistan,: http://www.medicaafghanistan.org/View.aspx?PageAlias=home